Zeosy dia malaza slot lalao izay mifototra amin'ny angano tanteraka Andriamanitra. Ny foto-kevitra dia tena quirky sy nahafinaritra ny milalao, koa dia tonga ny sasany tombontsoa mahafinaritra fotsiny izay tsara loatra ho marina. Inona no mampientam-po momba ity lalao ity fa efa nanokatra roa mitovy lalao. Noho ny lazany, Gaga ny olona no mandeha eo izany. Raha tianao ny sasany ara-tantara ny lalao amin'ny sary mahafinaritra avy eo ity New Slots Tsy misy petra-bola dia nijanona ny tsara ho anao.
Momba ny developer Zeosy Slots
Zeus is developed by the multinational company WMS that has been making some wonderful games. Mijery ny lazan'ny ity Slots Vaovao Tsy misy petra-bola lalao, WMS efa nanomboka nanampy ny sasany endri-javatra vaovao amin'ny fandefasana ny manaraka dikan-. Ny orinasa efa tapaka rakitsoratra rehetra ireo taona vitsy lasa ny mihamaro foana ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fahaizana izany tsikelikely tao New Slots Tsy misy petra-bola lalao, efa nahomby imbetsaka.
Zeus dia ahitana ny 30 paylines ary 5 miraingiraingy azon'ny rafitra amin'ny toerana ny handresy ny tsikombakomba maro manerana ny lalao. Manana ny foto-kevitra electrifying izay dia mora ny hahalala ny endri-javatra antsoina hoe indray-kofehy izay afaka indray-kofehy ireny fitandremana ny taloha winnings amin'ny mihazona sy mahazo ny hiaina ny New Slots tsy misy petra-bola.
Ny foto-kevitra angano dia manasongadina ny Andriamanitra mihitsy ary ny sasany mpandray anjara hafa toy ny Pegasus sy lokanga. Izy ireo koa ny vola madinika volafotsy sy ny volamena. Ny slot milina manana 3 sariohatra manan-danja ny aelezo, ny tselatra sy ny Andriamanitra.
Ny tselatra famantarana raha toa ka afaka mahazo anao niteraka tombontsoa maro ary handresy ny tsikombakomba fa ny aelezo sy ny tselatra fitambaran'ny dia tsy miasa. Ny avo indrindra dia ny mba handresena ao marika Andriamanitra mihitsy saingy milalao ihany no miasa rehefa ao amin'ny vondrona.
Afaka mandresy ny sasany tena vola ny $2,500 rehefa wager ara-drariny habetsahan'ny $150. Ny milina dia manolotra ihany koa ny vola madinika izay afaka mampiasa ny iray isaky ny mandeha miaraka amin'ny tsipika ambany indrindra Bet amin'ny 0.30 dolara sy indrindra amin'ny $5. Izy ireo koa no fotoana-mamonjy safidy ny autoplay izay afaka tsindrio autoplay ka nametraka ny safidinao.
WMS efa nahazo laza lehibe sasany miaraka amin'ny endri-javatra maimaim-poana lalao ary Nahazo be saina. Ny toerana ny lalao dia tena tsara mihitsy ary izany endri-javatra tonga tombontsoa sy ny tonga lafatra sary izay tena sarobidy. Tsy mahagaga raha izany New Slots Tsy misy petra-bola no tena tian'ny eo ny mpanjifa.